DriverPack εma nnimdiefoͻ - driver nhyehyεε amonom hͻ ara
TweTwe DriverPack Online
DriverPack CloudHwehwε Driver
Wͻn yε DriverPack εmaa nnimdiefoͻ nanso εnyε den sε ahyεasefoͻ nso de di dwuma
Twe DriverPack Online
Yi wo DriverPack
Twe pack nnoama a efata wo
Ꜫtwe no amonomuhͻa, ɛtwe n’asi drivers nyinara abra wonni intanɛt (1.71 MB)
Ԑkora drivers ma network nnwinade (Lan/Wi-Fi), wonni intanɛt mpo a ɛtumi di dwuma (688.28 MB)
Ԑkora driver nyinara, wonni intanɛt mpo a ɛtumi di dwuma, na wo tumi twe fri Torrent-tracker (27 GB)
Yεn yi w’asεmmisa ano
Mmrε pii no wo bisa nsεm εfa DriverPack ho — Yεn yi nsεmmisa deε ne din ahyeta
Ansa na me hu DriverPack, na me twe drivers firi intanεt dwumadibea foforo su, na na εma me ͻhaw pii. Dεn nti na drivers a efiri DriverPack di dwuma yie sini drivers a efiri kͻmputa abͻfo no ankasa.
Neε εbε yε a yε bε ma yε driver ho noͻma ndͻso kεkε nanso yε bε ma n’asi ne nanso, εno nti yε kͻso yε ho adwuma daa nyinara, na yε siesie ͻhaw a kͻmputa abͻfo εma ho kwan! Yε de adwennade adesua n’edi dwuma εho nti yεn nyiyimu nhyehyεε no kͻ so yie. Wei ho nti na wo bε tumi de w’ani ato drivers a efiri DriverPack so: -)
DriverPack noͻma dodoͻ yε sεn? Mε nya drivers a me hwehwε wͻ mu?
Besi nnε, yεn na yε kura driver ho nnoͻma pii, εno nti na mmrε 99% wo bε nya driver ama w’afidie. Sεneε εbε yε a yε bε nya drivers ho noͻma foforo pii no, εno ho nti na yε ne afidie bofoͻ ne drivers yε yεfoͻ de dwuma. Yε nya abotrε sͻ drivers na efiri wͻn Intanɛt dwumadibea ne FTP servers, na yε de yεn nnipa ho adwen kyerε kͻ adwen mu.
Ɛyε ampa sε yε de DriverPack ma kwa?
Yεn ngye sika wͻ yεn nhyehyεε nyinara ho! Nanso sε wo pε sεε wo boa yεn dwumadie no a, wo tumi si yεn nhyehyεε a εho wͻ mfaso na wo de adi dwuma, na sane kamfo DriverPack ma wo nnamfofoͻ: -)
Me virus banbͻfoͻ ahu virus wͻ DriverPack mu – dεn na εbε tumi asi?
Ɛbε tumi ayε sεε mfomsoͻ bi na asi, efiri sεε yε sεe mmrε sͻ yεn DriverPack su nyinara wͻ Kaspersky nhwehwεmubea. Yε kuo no ne virus banbͻhofoͻ pii tesεε Avast, ne 360 Total Security na adi dwuma. Sε wo pε sε wo kͻ so de yε di dwuma yie a, εnneε εwͻ sεε wo de DriverPack ka wo virus banbͻhofoͻ white list ho. Ɛbε yε yεn dε sεε wode mfomsoͻ yi ho nsεm bε bͻ wo virus banbͻhofoͻ ne yεn mmoafoͻ kuo no amaneε.
Su bεn na εwͻ DriverPack mu a εboa ma wo tumi de di dwuma yie?
DriverPack tumi bie amonom, na wͻn ayε no wͻ kwan bi so a εho nyε den sεε wo de bεdi dwuma mpo εma nnipa a wͻn nhyεda nnim kͻmputa mu. Na emom esan sεε yε dwen nnidiefoͻ ne abenfo ho nti, y’abͻ esu a ekura nnoͻma mu ahodoͻ pii a ehia wͻn. Sε wo pε sεε wo wura su yi mu a, εyε sεε wo bε teem bͻton na εwͻ kratafa yi asi hͻ no.
Driver no anhyehyε yie ama me kͻmputa no anya nsεm. Dεn na me nyε?
DriverPack dwumadie yi si ni nanso nanso ͻhaw nketenkete tumi si, nanso εntaa nsi. Wei nti yε yε bea a wo bεsie wo drivers dada na w’asan enya no bio. Sε neε εbε yε a wo bε si ͻhaw yi bi akwan wͻ daakye asεm mu no, kͻ DriverPack menu na bͻ yεn kra wͻ nnoͻma a yε hyehyεε ayi wͻ wo kͻmputa no mu.
Driverpacks (ahyehyεdeε ma drivers)
Yɛn driverpacks kora 7,007,975 drivers are yɛn ahyɛ da asi so dua